Guddiga Amniga Qaranka Doorashooyinka oo la kulmay Madaxweynaha Jubbaland (SAWIRRO) – STAR FM SOMALIA
Guddiga Amniga Qaranka Doorashooyinka oo la kulmay Madaxweynaha Jubbaland (SAWIRRO)
Guddiga Amniga Qaran ee Doorashooyinka dalka, ayaa waxa ay la kulmeen Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, kadib booqasho ay ku tageen Magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ee Jubbaland.
Madaxweynaha Jubbaland iyo Guddiga oo yeeshay kulan gaar ah ayaa waxa ay uga wada hadleen xaaladaha nabadgelyada goobaha Doorashooyinka ee deeganada Jubbaland.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa Guddiga amniga Doorashooyinka qaran wuxuu siiyay warbixin la xiriirta sida wanaagsan ee ay ku socdaan Doorashooyinka Deeganada Jubbaland.
Axmed Madoobe ayaa sheegay iyadoo aysan jirin carqalad dhinaca amniga ah, si habsami leh inay ku socdaan howlaha la xiriira Doorashooyinka.
Guddiga Amniga Qaranka oo uu hogaaminaayo Maxamed Sheekh Xasan Xaamud Taliyaha ciidamada Booliska, ayaa si weyn u bogaadiyay hanaanka nabadgelyada ee Doorashada Jubbaland.
Taliyaha ciidamada Booliska ayaa sheegay Doorashooyinka Jubbaland si nabadgelyo ah inay ku dhaceen, isaga oo sheegay inay booqdeen meelaha Doorashada lagu qabanaayay.
Guddiga Amniga Doorashooyinka Qaranka ayaa maalmahan safaro ku tagaayay deeganada Maamul Goboledyada dalka si ay u soo eegaan hanaanka amni ee doorashada
Uganda oo xirtay nin la tuhmaayo Shabaab inuu gacan saar la leeyahay
Doorashada Xubnaha Aqalka hoose ee Jubbaland oo maanta la soo gaba gabeynaayo